JOORNAAL – Page 2 – “Aqoon la'aani waa iftiin la'aane”
May 7, 2017 by joornaal
Mushkilad (problem) waxay noqon kartaa waxyaabo badan. Waxay noqon kartaa qof wax la xarbinaya(strugle) dhibaato u baahan baaris (puzzle), dhibaato u baahan in shay la qabto (task).
Aniga waxaan arkaa in ay fiicantahay in dhibaatada loo kala qaado farqiga u dhexeeya waxa jira oo meesha yaal iyo shayga la rabo oo la doonayo.
Waa in aad fahamtaa waxa macaamiishaada ay u malaynayaan in ay haystaan ama jira. Iyo waxa ay u malaynayaan in ay rabaan iyo weliba sida ay u rabaan in wax loogau qabto.
Haddii aad wax badan noolaato waxaad heli qibrad nololeed oo aad ku xaliso mushkiladaha. Aniga waxaan door biday oo aan arkay in qodobadaan ay aad ii caawiyaan markii aan rabo in aan mushkilad cid kale xaliyo:
Xoogaa u yara naso
Markii mushkilad ama dhibaato xali lagu yiraahdo xoogaa yara joogso inta aadan xalinteeda u dhaqaaqin.
Mushkilad xalkeeda meesha uu ka bilowdo waa in “aadan waxba sameyn kolka hore, ee aad ka yara istaagtid” qodobkaan wuxuu muhiim u yahay markii ay jiraan mowqifyo badan iyo mid koox mid walba u arko maslaxada fikirkiisa uu aasagu wato. Weliba waxaa ka sii daran markii adiga aad rayi adag arinta aad ka qabtay oo kugu qufulnaa aad meesha la timaado. Marka in aad yara nasato oo joogsato, waxaa ay ku siineysaa fursad waxyaabo badan kuugu qabsoomaan oo ay ka mid yihiin: In aad neefsato, in aad dhex dhexaad noqoto, in akhbaar cusub aad hesho, in aad ogaato in mushkiladu ka duwan tahay tii aad markii hore aaminsaneyd iyo weliba adiga oo arka in xalka uu marka danbe asagoo iska cad kuu muuqdo. Markaan leeyahay xoogaa yara naso, kama wado in aan leeyahay waxba ha qaban. Wax badan ayaad qaban kartaa, laakiin waxaan ka wadaa arinta intaadan talaabo ka qaadin u fiirso oo dhageyso, ishaada ku arag waxa ka socda meesha adiga oo aad ugu dhaba galaya xaalada dhabtaa ee meesha ka jirta, isla markaana wareysanaya dadkaas arinta ku lug leh iyo kuwa ka ag dhow dhow intaba. Dhegeysiga iyo macluumaad aruursiga badso.
Fiiro gaara lahow, qalbi xaadir ah keen
Macluumaad ka mushkilada wuxuu kaa qarsoomi karaa asagoo ku horyaal
Waxaan inta badan helaa waxa aan u baahanahay in aan mushkilada ku xaliyo in aan si cad la iigu sheegin. Waxaan kaloo ogaaday in aysan ii sahlanayn in aan maqlo macluumaad la ii sheegay. Sidaas daraadeed wada hadal wax la is dhaafsadaa ma ahan arin sahlan. Aniga waxaan arkay in aan ka faa iiday habka ama moodal ka afka ingiriiska loo yaqaan (Satir Interaction Model) kaas oo wada hadalka u kala qaybiyay afar qaybood: Qaadasho (Intake), Macne(Meaning), Muhiimnimadiisa(Significance) iyo jawaabta (Response).
Qaadasho(Intake) waa waxa aad aragto ama maqasho.
Macnuhu(meaning) waa isku darka fikradaha aan u maleyney wixii aan ka qaadanay wergelintaas ama qaadashadaas.
Muhimadu(Significance) waa sida ay wergelintaas iyo faaladaas ay dareen noo gelisay iyo sida ay qalbigeena u saameyso.
Jawaab Celin(Response) waa waxa aan sameyno cagsiga wixii akhbaar iyo faalo naga soo gaaray wada hadalkaas
Waxa aan ku jeclaaday moodal kaan waxaa weeye, waxay igu caawisaa in aan ogaado siyaabaha xalin mushkilo ay ku burburi karto ama u weecan karto. Haddii qayb ka mid ah moodalkaan (Process) uu qaldamo, wada hadalku ma toosi doono ama wuxuu yeelan doonaa iimo badan.
Waxaad kaloo ogaaneysaa markaad moodeelkaan fahamto meesha aad daciifka ku tahay. Aniga waxaan ku deg degaa jawaabta (Response) anigoo aan waqti badan ku lumin sadexda kale, sidaas daraadeed waxaan isku dayaa in aan ka feejignaado in aan bixiyo jawaab(Response) inta aan ka maqlayo dadka intooda badan meesha ay wax u wadaan. Marka xoogaa u yaro naso waxaa ay ii saamaxdaa in aan helo waqti aan ku ogaado sadexda hore inta aanan jawaab gaarin.
Markii aan ka dhigo mushkilada mid aniga kaliya aan xalin karo, waxaa ka dhalanaya in aan mushkilad cusub u abuuro dadka ay khusayso oo dhan
Markii mushkilad xali la iyiraahdo, mushkiladu runtii maahan mushkiladeyda! Aniga maahi ninka dhexda kaga jira ee farta ku fiiqantahay, qofkii loo xalinayey ayaa ah kan dhabta ah ee iska leh mushkilada. Markii aan xalinayo mushkilad waxaa jira khatar (risk) taas oo ay dhici karto in aan:
Qofkii u xaliyo asagoo aan baran siduu beri u xalin lahaa mushkilada
2. In waqti badan aan shaqadeyda ka qaato si aan ugu xaliyo
3. In ay ka dhalato inuu mar walba iila yimaado mushkiladihiisa
4. In aan keeno xal uusan qofkii lahaa wax xiriir ah la lahayn
Sidaas daraadeed qodobka la shirkow wuxuu i xasuusinayaa in aan ka dhigo kan mushkilada loo xalinayo mid ka qayb qaadanaya xalka. Sida ugu wanaagsan waa in qofka ama shirkadu ay xalisato mushkiladooda adiguna aad caawin iyo taageero la garab taagnaato. Dhibaatada ugu xun ee kaa soo gaari kartaa waa in aad si aad ah intaad arinta adiga mid aad leedahay u maleysid oo lugta la gasho, markii aad soo bandhigto xalkaaga cajiibkaa aad ka warhesho in qofkii ama shirkadiiba hilmaantay mushkilada ayna horey uga jaan qaaday.
Xalka ha ka jeclaan qofka mushkilada haysato
Adigu ha ka jeclaan qofkii arinta xali ku yiri xalkeenida.
Hadda ka hor waxaan la shaqeeyey dawlad carbeed oo aan u sameyneyney software ay isticmaalaan. Waxaa ay luminayeen lacag aad u faro badan waayo ma aysan ogeyn waxa baqaaradooda ku jira, isla markaana waxaa ay dalbanayeen alaab dayuuradaha lagu dayac tiro oo malaayiin joogta. Waxaan ku niri, lacagta Software aad ku gadaneysaan waxay idiin soo noqoneysaa 6 bilood gudohood haddii aad gelisaan waxa aad hadda haysataan systemka (Inventory).
Markii aan usbuuc la shaqeynayey ayaan ogaadey in aysan bixineyn ama u dirayn dadkii iyo tiradii loo baahnaa in alaabta lagu xareeyo systemka. Aniga oo kaliya ayaa rabay in arintaan ay dhacdo si ragaan lacag faro badan ugu baaqato. Waxay noqotay in aan aniguna sidooda oo kale iska yara nasto waayo, haddii ninkii dhibaatada qabay uu ka jiifo, maxaad kaga xiiqi xal aadan kaligaa gaari karin. Marka shaqsi ama shirkad aan habuun ama gaajo iyo orod ka muuqan in ay xaliyaan mushkilad, ogow in aysan mushkilad hayn. Markii markii uusan mushkilad u arkin ama qabin in aadan wax xalin ayaduna mushkilad maaha.
Waxaa sidaa la mid ah dad badan oo ka mid ah qaraabadaad oo raba in mushkiladooda loo xaliyo ayaguna ay iska fariistaan. Weligaa ha barin qofna in aad adigu ka jeclaato dantiisa wixii aan ka ahayn hooyadaa, aabahaa iyo caruurtaada inta ay ka qaan gaarayaan
Dardar gelinta (Passion) ma ahan wax la xiriira caqliga, sidaas daraadeed mushkilad caqli kaliya kuma xalin kartid. Waa in aad la xiriirisaa caqliga iyo qalbiga(emotion) si xal waara loo helo. Waa in aad barataa oo aragtaa cidda aad wax u xalineyso kadibna heshaa hab aad ku gasho dunida iyo hanaanka ay aduunka u arkaan. Sidaad shirkad Jarmal ah wax ugu xalineyso waa ka gedisantahay sida aad shirkad carbeed wax ugu xalineyso.
Mushkilad kastaa waa mid shaqsi ah
Mushkilad kastaa waxay mushkilad u tahay shaqsi.
Qodobada aan kor ku soo xusay oo dhan tan ayay gogol xaar u ahaayeen. In aad mushkilo xaliso, waxaad u baahantahay in aad ogaato cida ay mushkilad u tahay, isla markaana aad hesho xal(Solution) u shaqeynaya shaqsigaas. Marka dhibaato malaha haddii aad tahay kii mushkilada lahaa isla markaana aad tahay kii xalinayey. Dhibaatadu waxaa ay imaaneysaa markii aad wakiil ka tahay kii dhibaatada ama mushkiladu haysay sida madaxa shirkada ama milkiilaha shirkada. Xaaladaas oo kale waxaa meesha ku jira dad fara badan oo lagaa rabo in aad la tacaamusho. Sidaas daraadeed waa in aad dadkii la tacaamusho isla markaana aad mushkiladii xaliso. Waxaa soo galaya sida ay dadkaan u arkaan mushkilada jirta, sida ay ayaga qudhooda isku arkaan iyo xiriirka ka dhexeeya. Waxaa soo galaya siday adiga qudhaada kuu arkaan, iyo sida ay u arki doonaan xalka aad keeni doonto. Intuba waa mushkilad adiga lagaa sugayo xalkeeda.
Mustaqbalku waa wixii aad maanta wax ka qabato
Hiigsashada (Goals) waxaa ay wax ka badashaa waxa jooga ee wax kama badasho waxa soo socda (future)
Waxaad leedahay shay aad hiigsaneyso. Mar walba dib ayaad u dhigtaa. Waxaad rabtaa in aad maalin uun qabato. Waxaad u danleedahay in aad wax ka qabato laakiin dhiiri gelin ayaad u baahantahay.
Hadaba iska hilmaan hiigshadaas maanta wixii ka danbeeya. Waa hiigsasho qaldan oo aan kuu fiicneyn.
Haddii ay ahaan lahayd hiigsasho fiican, mar hore ayaad meesha iskaga boodi lahayd oo wax ka qaban lahayd. Ma aadan sugteen. Wax kaa joojin karaa ma jireen.
Hiigsasho ma ahan wax mustaqbalka lagu hagaajinayo. Mustaqbal wax jooga maahan. Mustaqbalku waa wax maankaaga oo kaliya ku nool ee sidiisaba ma ahan wax jira oo xaqiiq ah. Ma kula tahay in January 1st, 2011 ay dadka Suuriyiinta aamin sanaayeen in maanta ay noqonayaan dad dalkoodii burburay! Waa maya. Mustaqbal Allah unbaa og sidaas daraadeed kuma xisaabtami kartid. Waxaa ku xisaabtami kartaa maanta.
Sidaas daraadeed waxa muhiim ka ah waa waxa maanta jooga iyo wixii aad ka yeesho.
Sidaas daraadeed hiigsashadaada(Goals) waxaad ku cabirtaa sida ama hanaanka wanaagsan ee ay wax kaga badalaan talaabooyinka aad qaadeyso waqtigaaga xaadir ka ah.
Hiigsasho (goal) xun waxay ku tiraahdaa sidaa iyo sidaa maalin unbaan sameyn.
Hiigsasho(goal) wanaagsan markaa ayaad talaabo qaadi oo fadhiga ka kici.
Hiigsashada xumi ma cadda, ciiryaamo ayaa ku gadaaman, waa wax mustaqbal ama fog. Hiigsashada wanaagsan waa kuu cadahay, waa cayiman tahay, waa dhow dahay oo waxaa moodaa in aad soo taaban karto.
Hiigsasho xun, waxaad tiraahdaa ma garanayo sidaan u bilaabi lahaa ama meeshaan ka bilaabi lahaa. Laakiin hiigsashada fiican waxaa leedahay waan ogahay talaabada aan qaadayo maanta iyo mida ku xigta.
Hiigsashada xun waxaad tiraahdaa “bal aan xoogaa ka soo fakaro, oo yara ku soo seexdo. Hiigsashada wanaagsan kama seexan kartid waayo beri subax hawshii iyo talaabadii aad ka qaadi lahayd ayaad sugi la’dahay.
Hiigsasho xun wadaa tiraahdaa markii aan hawlahaan soo dhameeyo ayaan sameyn doonaa. Hiigsashada fiican, ayada ayaad wax walba ka hor marisaa.
| Tagged featured | Leave a comment